के लिम्बू काशीगोत्रे नै हुन् त ?
टिप्पणी शनिबार, साउन २५, २०७६
मुन्धुममा काशी गाेत्रे भनिएकाे लिम्बू भारतकाे काशी नभई चीनकाे काशीबाट नेपाल पसेकाे दाबी तथ्यकाे नजिक देखिन्छ ।
०६८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा लिम्बू जातिको जनसंख्या ३ लाख ८७ हजार ३०० छ । यो संख्याको आधारमा मुलुकमा बढी जनसंख्या भएको जातिमा लिम्बू १४औं स्थानमा पर्छ ।
तर, यति संख्यामा भए पनि लिम्बू शब्द प्रयोगको अभिलेख १८३१ सालअघि भने पाइन्न । राजा पृथ्वीनारायण शाहले जारी गरेको कागजातमा यो शब्द पहिलो पटक लेखिएको जानकारी छ । सेन कालमा भने लिम्बूलाई राय भनिएको छ ।
दशकयता लिम्बू जातिबारे थुप्रै लेख, पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशमा लिम्बूको इतिहास, मुन्धुम आदिको चर्चा गरिएको छ । मुन्धुममा लिम्बूलाई आर्य जातिलाई जस्तै ल्हासा गोत्रे र काशी गोत्रे भनिएको छ ।
लिम्बूका पुजारीले पनि ल्हासातिरबाट आएका पूर्वजलाई ल्हासा गोत्रे र काशीतिरबाट आउनेलाई काशी गोत्रे भनिएको हो भनेर अथ्र्याउँदै आएका थिए ।
लिम्बू ल्हासा (तिब्बत, चीन) तिरबाट आएका हुन् भन्नेमा विवाद छैन । तर, काशी (भारत) बाट पनि पसेको कुरामा अधिकांशको विमति छ ।
किनभने, दक्षिणबाट त आर्य, हिन्दू धर्मावलम्बी प्रवेश गरेका हुन् । त्यसो त मुन्धुममा गोत्रको परिभाषा पनि गलत रुपमा गरिएको छ ।
प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश अनुसार गोत्रले वंशका प्रवर्तक ऋषिको नामबाट चलिआएको पुख्र्यौली भन्ने जनाउँछ ।
आर्य समुदायको अधिकांशजसो वंश प्रवर्तक ऋषिहरू मानिन्छन् । गोत्र खास विशिष्ट व्यक्तिको नामबाट चलेको कुल वा पुख्र्यौली भनेर पनि अर्थ लगाइन्छ । तर, लिम्बू समुदायमा गोत्रले वंश प्रवर्तक नजनाई स्थानविशेष भएर आएको ठाउँलाई इङ्गित गरेको बुझिन्छ ।
गोत्र अर्थ अनुसार एक पूर्वजको सन्तान एकै गोत्री हुन्, उनीहरूबीचका सन्तानबीच बिहेबारी चल्दैन । तर, लिम्बूको विवाहमा गोत्रको चर्चै गरिन्न । यसबाट पनि लिम्बू समुदायमा गोत्रको अर्थ फरक रहेको बुझिन्छ ।
एक वर्षअघि भगिराज इङनाम लिखित पुस्तक लिम्बू जातिको इतिहास ले भने लिम्बू गोत्र भनिएका ल्हासा र काशीबारे फरक तर्क बाहिर ल्याएको छ । पुस्तकका अनुसार, मुन्धुममा भनिएको काशी भारतको काशी अर्थात् बनारस नभई चीनको सुदूरपश्चिमको उपत्यका सिन्चियाङ प्रान्तस्थित काश्गर/खाश्गर हो भनिएको छ । चिनियाँ अभिलेखमा काश्गरलाई काशी लेखिएको पाइन्छ ।
चीनको काश्गर (काशी) उईगुर भनिने मुश्लिम समुदायको थलो हो । उनीहरू मूलतः तुर्किज मूलका मानिन्छन् । तर, उनीहरुमा ककेसियन र मंगोलियन वंशाणु मिश्रण भएको बताइन्छ ।
रिस्ले र चेम्जोङको अपव्याख्या
किरात इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले आफ्नो किरात इतिहास पुस्तकमा लिम्बू ल्हासा र काशीबाटै आएको कुरा लेखेका छन् ।
चीनकाे सिन्जियाङ प्रान्तस्थित काश्गर ।
तर, यो उनको मौलिक अध्ययन थिएन । उनले सन् १८९२ मा नृवंशशास्त्री हर्बट होप रिस्ले लिखित ‘द गजेटर अफ सिक्किम’ कै अनुसरण गरेका थिए, जहाँ मुन्धुमलाई नै उद्धृत गर्दै उही ‘लिम्बू ल्हासा गोत्रे र काशी गोत्रे हुन्छन्’ भनी लेखिएको छ ।
अर्जुनबाबु माबुहाङ लिखित पुस्तकमा लिम्बू जातिको उद्भव तमोर नदी र फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण) आसपासका ठाउँमा भएको अनुमान गरिएको छ । किनभने, लेलेप, इखाबु, घुन्सा खोला, हेल्लोक, तापेथोक आदि ठाउँमा पूर्वज बसोबास गरेको मुन्धुममा उल्लेख छ ।
पूर्वजहरू विभिन्न झुण्डमा ओडारमा बसेको प्रसंग पनि मुन्धुममा आउँछ । तर, ओडारमा बस्न आउनुअघि लिम्बू कहाँ थिए ? यो भने अस्पष्ट नै छ ।